BAHLINZEKWE NGEZINCWADI ZOKUSHAYELA EMANDENI – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Oct 23, 2020 111
BEBEBUKEKA bejabulile kanjena abantu abasha baseMandeni abalekelelwe nguMkhandlu waseMandeni oholwa nguKhansela Thabani Mdlalose ngokuthi bahlinzekwe ngezincwadi zokushayela.
LUBUKEKA luthela izithelo ezinhle olusungulwe nguMkhandlu waseMandeni oholwa nguKhansela Thabani Mdlalose, lokuhlinzeka ngezincwadi zokushayela abantu abasha bakule ndawo.
Lolu hlelo kuvelile ukuthi lo Mkhandlu uhlose ngalo ukuqinisekisa ukuthi bathola umusa wokulekelelwa benzelwe izincwadi zokushayela abantu abasha bakule ndawo abangakabi nazo izincwadi. Lolu hlelo lo Mkhandlu ulwenza ngokubambisana nabeMalume Driving School.
Muva nje bangu-18 abantu abasha baseMandeni abavela ezindaweni ezahlukene abanikezwe izincwadi zabo zokushayela kulona lolu hlelo. Lolu hlelo lokulekelelwa kwabantu abasha ngezincwadi zokushayela uKhansela Mdlalose uluchaze njengolumqoka kakhulu.
Wathi akangabazi nje nakancane ukuthi luzothela izithelo lusize abantu abasha abaningi baseMandeni. Ngokusho kwakhe uKhansela Mdlalose bakubeka eqhulwini ukuqinisekisa ukuthi bayanakekelwa abantu abasha baseMandeni ngazo zonke izindleala.
Mayelana nalolu hlelo lwezincwadi zokushayela uphawule wathi: “Lokhu kungenye yezindlela zethu njengoMkhandlu waseMandeni esizama ngazo ukuqinisekisa ukuthi siyabafukula abantu abasha bakule ndawo. Njengoba sazi ukuthi sibhekene nesikhathi esinzima kakhulu sokuntuleka kwemisebenzi, sikholwa wukuthi lolu hlelo ke lwezincwadi zokushayela luzodlala indima enkulu kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi abantu abasha baseMandeni bayawathola amathuba emisebenzi. Okungenani ke bakwazi ukuthi bakhande amathuba emisebenzi.”
Kuzokhumbuleka ukuthi lo Mkhandlu uvele unezinhlelo ezihlabahlosile ohlose kakhulu ngazo ukufukula abantu abasha bakule ndawo.
Abantu abasha bakule ndawo ikakhulukazi labo abahlomulile kulolu hlelo babonge banconcoza kulo Mkhandlu. Iningi labo lithe linethemba lokuthi lezi zincwadi zokushayela zizoba wukhiye omqoka ekuvuleni iminyango yamathuba omsebenzi.
Bazawakalise nokugculiseka okokhulu mayena nendlela uMkhandlu waseMandeni oqinisekisa ngayo ukuthi abantu abasha bakule ndawo kabasali ngaphandle ezinhlelweni ezimqoka nezihlabahlosile.